Tafakatra 114 ireo matin’ny valanaretina: niampy valo ireo lavon’ny Covid-19 tao anatin’ny 48 ora | NewsMada
Par Taratra sur 03/08/2020
Valo ireo indray namoy ny ainy tao anatin’ny roa andro noho ny Covid-19. Ny iray, maty ny asabotsy teo ary ny fito hafa kosa, nodimandry omaly. Anisan’ny ambony indrindra io isa tao anatin’ny iray andro io hatramin’ny 17 jolay noho mankaty.
Nialana nenina notsaboina tetsy amin’ny HJRA ny iray. Ireo fito kosa, mitsinjara ho roa avy ireo lavo tetsy Befelatanana sy teny Anosiala ary iray teny Andohatapenaka. Iray avy kosa ireo lavo tany Andrainjato Fianarantsoa sy tany Mahatsinjo Betanimena, Toliara. Anisan’ny antontanisa ambony indrindra io omaly io amin’ireo maty tao anatin’ny iray andro. Ny 17 jolay teo, nahatratra 10 ireo lavo tao anatin’ny 24 ora. Tafakatra 114 izany izao ireo namoy ny ainy noho ny Covid-19 hatramin’ny volana mara no ho mankaty.
Miisa 225 ireo nifindran’ny Coronavirus eto Analamanga
Etsy andaniny, miisa 255 ireo nifindran’ny valanaretina, araka ny tatitra, omaly, ka maro anisa hatrany ny avy eto Analamanga. Miisa 225 izany raha 12 ireo tranga vaovao any Boeny. Fito ny any Alaotra Mangoro raha efatra ny any Atsimo Andrefana. Roa avy kosa ny any Menabe sy ny any Atsinanana ary ny any Sofia. Iray ny nifindran’ny valanaretina any Vatovavy Fitovinany.
Etsy andaniny, miisa 90 ireo marary mafy ka mbola Analamanga ny maro amin’izany.
Miisa 79 ny « forme grave » eto Analamanga
Miisa 79 izy ireo. Mitsinjara ho 47 etsy Befelatanana raha 13 ny eny amin’ny HJRA. Eny amin’ny Homi kosa ny roa raha 11 ny eny Anosiala. Roa avy ny etsy Andohatapenaka sy eny Fenoarivo ary ny CTC-19 Mahamasina. Any amin’ny faritra Boeny kosa, miisa dimy ireo marary mafy. Efatra ny any Matsiatra Ambony ary roa ny any Vakinankaratra.
Na izany aza, miisa 335 ireo sitrana ka mahatratra 8 444 izany izao ireo nahafeno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana. Miisa 11 528 ireo nifindran’ny Coronavirus hatramin’ny marsa no ho mankaty ary mbola miisa 2 970 ireo manaraka fitsaboana. Tafakatra 43 435 kosa ireo fitiliana vita.